घाँटी मा एक चुम्बन एक दृष्टि? सपना पुस्तक यस्तो मामला मा यो बिन्दुमा परीक्षण गरिएको छ कि भावना सुन्न सुझाव। र अझै पनि दृष्टि सँगसँगै भन्ने विवरण सम्झन। खातामा सबै सपनामा वर्तमान nuances लिएर उहाँलाई सबैभन्दा सही र विश्वसनीय व्याख्या दिन सक्षम हुनेछ।
एक मानिसको दृष्टि घाँटी "जीवनसाथी" मा उनको चुम्बन भने, यो रमाइलो गर्न सम्भव छ। यो सपना निष्कपटता र अनुभव भावना reciprocity प्रतीक र सायद सम्बन्ध नयाँ चरण को आसन्न आगमन औंल्याउनुहुन्छ। मानिस आफ्नो भीषण शत्रु हो जो एक को घाँटी चुम्बन भने, यो त्यो तयार जो अर्को झटका लागि तयार हुन आवश्यक छ।
दृष्टि सम्बन्धित आफ्ना प्रश्नहरूको जवाफ पाउन प्रयास गर्दै, एक आफ्नो वास्तविक स्थिति खातामा लिनुपर्छ। यो हरेक सपना पुस्तक सम्झना दिलाउँछ। घाँटी मा चुम्बन, सपना देख्यो अप एकान्त व्यक्ति, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र "दोस्रो आधा" को खोजी को पूरा उहाँलाई आनन्द प्रतिज्ञा। जो पहिले नै साझेदार छ लागि, यस्तो दृष्टि पनि एक सुखद Omen छ। सायद, मान्छे लामो सपना देख्यो के के प्राप्त हुनेछ।
यो सपना पुस्तक मा हेर्न उचित छ। एक केटी रुचि मानिस को घाँटी मा चुम्बन, तर वास्तविकता मा एक गोप्य पत्ता लगाउन उनको इच्छा संकेत, ध्यान देखाउन छैन। सपनाहरु देखने केही गर्न चाहँदैनन् छ भने, त्यसपछि, सम्भवत, यसको वातावरण मा कसैले insincerely व्यवहार गलत छ। यस मामला मा, तपाईं कम भरोसा बन्न हुनुपर्दछ, र भित्री सर्कल भित्र मान्छे हेर्न।
त्यसैले चाँडै कसैले उनको humiliate खोज्छ - सपना मा केटी त्यो Foreplay तिर पहिलो चरण लिएको छ भने, आवेग प्रतिक्रिया उनको घाँटी आफ्नो ओठ स्पर्श जो वस्तु, चुम्बन गर्न थाले। साथै, सायद, कसैले केही गोप्य पत्ता लगाउन एउटा काल्पनिक मित्रताको मास्क पछि लुकाउने प्रयास गर्नेछ।
तर छैन सपना पुस्तक बताउँछ सबै छ। पछि देखि घाँटी मा चुम्बन केटी, वास्तविकता त्यहाँ आपसी सहानुभूति छ, तर त्यहाँ कुनै सम्बन्ध हो जसलाई एउटा मानिस द्वारा, यो एक शुभ चिन्ह लाग्न सक्छ। तर वास्तवमा, यो दृष्टि समस्या भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ। प्रयोग गर्न, विकल्प वा धोका चाहनुहुन्छ गर्ने सायद केटी। शायद यो पनि आवेग को वस्तु whirlwind रोमान्स शीर्षक, कि उनको हात प्ले हुँदैन बस बेवस्ताई र naivety परम सपनाहरु देखने छ।
परिवार सपना बुक
पढ्न र यसलाई व्याख्या गर्न प्रोत्साहन दिए। यस अचेतन बाट संकेत स्त्रीले उहाँलाई देखि पर्याप्त छैन ध्यान उठ्दै कसरी यो सपना पुस्तक मानिसको घाँटी मा एक चुम्बन बताउँछन्। यो छ भने, त्यसपछि यो मा सङ्केत गर्न समय।
विशेष ध्यान महिला देखेको जो थिएन कसैले उनको एक भावुक चुम्बन र रमाइलो दिनुभयो दर्शन मा भुक्तानी गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो सपना चेतावनी छ। र त्यो हेरोइन दृष्टि धोका घनिष्ठ मित्र को सम्भावित मनसाय वार्ता।
केही राम्रो प्रतिज्ञा र पराई देखि घाँटी मा काँतर चुम्बन। एक प्रेमी द्वारा विश्वासघात गर्न - सपना पुस्तक यो छ भन्छन्।
तर महिला आफु कसैलाई दृष्टि यति घनिष्ठ टोकन दिए भने, यो सम्भव आनन्द छ। यो वित्तीय राम्ररी जा व्यापार राम्रो भाग्य, साथै नयाँ सुखद परिचितहरू मा जीवनको उद्भव गर्न छ।
तथापि, अक्सर यस्तो रोचक कथाहरू घनिष्ठताका प्रवेश गर्न सपनाहरु देखने को इच्छा embody (पुरुष वा महिला कि)। खैर, यो मनोविश्लेषण गरेको सपना पुस्तकमा यसो। के तपाईं विश्वास भने, के चुम्बन भावुक र "आगोको" वातावरण थियो, hotter सपनाहरु देखने को सेक्स जागा छ।
यो स्रोत अनुसार, घाँटी मा एक चुम्बन सम्बन्ध प्रतिनिधित्व गर्छ। तर सधैं राम्रो कुरा portend छैन।
distantly भने, "शो को लागि", ohladevshie भावना embodies रूपमा गरिएको थियो कि, एक मानिस पछि देखि घाँटी मा एक चुम्बन: यहाँ के सपना पुस्तक हो। भावुक तर संक्षिप्त स्पर्श यसलाई आफ्नो सम्बन्ध यस्तै लम्बाइ मा संकेत भने। सामान्यतया बेचैनी छोड्छ कि चुम्बन प्रिय सपनाहरु देखने उनको धोका संकेत गर्दछ।
तर तपाईं उनको घाँटी आफ्नो ओठ स्पर्श यदि लामो र भावुक Foreplay मा उत्तेजित गर्दछ - एउटा नयाँ स्तरमा सम्बन्ध सार्न छ।
यसको पृष्ठ मा तपाईं पनि केही रोचक कुराहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। विशेष विस्तार मा वर्णन Expositor छ के, घाँटी मा चुम्बन सपना मित्र वा प्रेमिका द्वारा गरे। कुनै आकर्षण छैन जसलाई सिद्धान्त मा व्यक्ति हो।
यो दृष्टि जो पछि जवान मान्छे को मित्रता ओरालो जाने घटना, भविष्यवाणी गर्ने विश्वास गरिएको छ। आपसी आदर सम्भावित स्थायी हानि।
र अझै चुम्बन प्रेमी / प्रेमिका दबावपूर्ण थियो जसमा केही राम्रो दृष्टि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा विश्वासघात गर्छ त्यो छ। त्यसैले परिचित र प्रिय देखिन्थ्यो गर्ने एक, सबै यो देखिन्थ्यो के छैन हुनेछ।
कामुक सपना बुक
उहाँले पनि घाँटी मा एक चुम्बन के हो भनेर व्याख्या गर्न सक्षम छ। सपना पुस्तक यसो भन्छ - कि दर्शन केहि गलत दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन। यदि एक्लो केटी त्यो छैन, त्यसैले जीवनमा उनको साझेदार हुन सक्छ जो एक, उनको अर्को छ, तर यो केवल याद छैन हालसम्म सक्ने हेर्न मानिसको ओठ, एक कोमल स्पर्श महसुस गरे।
यो सपना पुस्तक बताउँछ सबै छैन। पनि आश्चर्य को एक harbinger हुन सक्छ सबैभन्दा रमाइलो थियो पराई द्वारा घाँटी मा चुम्बन। मात्र जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा उहाँले उपचार गरिनेछ - अज्ञात छ।
मानिस Dreamwalker शक्ति चुम्बन? एकदमै रमाइलो छैन परिस्थिति, तर राम्रो व्याख्या। सपना बस यसलाई जित्न, केहि गर्न जान तयार हुनेछ जो एक भावुक प्रशंसक जीवनमा महिला को उद्भव भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ।
खैर, यसको लागि अनपेक्षित आवेग संग सपनाहरु देखने जवाफ अजनबी इशारा गर्न भने - राम्रो छ। चाँडै यो नाटकीय राम्रो लागि आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्ने मौका दिइएको छ। यो, यो लापरवाह लाग्न सक्छ पनि भने, एक मौका लिन निर्णय र पछुताउनु छैन।
यस दर्शनमा चुम्बन आफ्नो वर्ण, impassioned, को intima सारियो जुन पछि आउनुअघिको थियो? यो सपनाहरु देखने (सेक्स बिना) आफ्नो आवेग रोक्न धेरै गाह्रो छ कि सुझाव। उहाँले यौन भावना पनि susceptible छ। र संचित "ऊर्जा" सकेसम्म, यो राम्रो गुमाउन छ, वा संवाददाता वर्ण को विचार व्यापार गर्न एक व्यक्ति हस्तक्षेप हुनेछ।
रूपमा एक मा देख्न सकिन्छ, र सोही दृष्टि धेरै व्याख्याहरु छ। र तपाईं साँच्चै सपना सपना देख्यो छ के थाहा गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले खाता मा आफ्नो सबै विवरण लिन र एक तर धेरै व्याख्याकारों लागू गर्न आवश्यक छ।
निद्रामा: बस मा बस सवारी। किन बस मा यात्रा को सपना?
डरलाग्दो! किन मरेको बच्चा को सपना?
बगैचा डिजाइन: गर्मी मौसम 2013
भिटामिन ए र बी मा के खाद्य पदार्थ धनी मा
हामी हिंड्न-पछि गर्ने अधिकार चाहिन्छ? हिंड्न-पछि ट्रेक्टर ट्रेलर। औसत शक्ति टिलर्स
खाद्य पदार्थ मा ट्रान्स-बोसो। के खाद्य पदार्थ ट्रान्स बोसो समावेश र तिनीहरूले शरीर लागि खतरनाक हो कसरी
असल पानी आधारित स्नेहक?